TCDD Eskişehirပညာရေးစင်တာတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
29 / 09 / 2012 Levent Ozen လောက, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
မီးရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UIC) ကာတာနိုင်ငံ 10 အတွက်လုပ်ဆောင်တယ်။ ဒေသတွင်းလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာညီလာခံ (UIC-Rama) နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်းကျောင်း (အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်း Center- တစ်ဦးက mertcan) TCDD Eskişehirပညာရေးစင်တာတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
TCDD နှင့် UIC mertcan က "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်း" နှင့်အတူပူးပေါင်းအောက်မှာဖွဲ့စည်းနှင့် 01-02 2012 အောက်တိုဘာလတွင် Eskisehir အတွက် "High Speed ​​ကော်မတီအစည်းအဝေး" ကိုဤအစည်းအဝေးအပြိုင် Anemon ဟိုတယ်၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏ xnumx't "High Speed ​​ကော်မတီအစည်းအဝေး" ပြည်တွင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကိုပထမဦးဆုံးနေ့၌ပြင်ပတွင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး '' ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရထားလမ်းစံဆီသို့ ',' အခြေခံအဆောက်အအုံဘဏ္ဍာရေး ',' လွတ်လပ်နှင့်ရထားလမ်းကိုစတင်မည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းမှာ 1 အောက်တိုဘာလ 2012 တနင်္လာနေ့, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုသည်လွတ်လပ်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များပြီးနောက် '' ဥရောပ-စပိန်၏အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံနှင့်ဥပမာများခွဲခြာ, '' '' ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အောက်တိုဘာလ22012 09.00 အစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့2နာရီပေါ်ရာအရပျယူပါလိမ့်မယ်။ 'တစ်ဦးတစ်ချက်ကုန်တင်မှာအာရှအလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း' 'သောကာလ၌' 'ရထားလမ်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ်' ', စီးပွားရေးရှုထောင့်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် Intercontinental ကုန်တင်စင်္ကြံ 'အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းချက်များဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ 1896 TCDD ESKISEHIR ထဲသို့ SERVICE ကိုသင်တန်းစင်တာ
တူရကီအတွက် Eskisehir အတွက်မီးရထားပေါ်ပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနိုဝင်ဘာလ 21 1896 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုသမိုင်းကနေကွဲပြားခြားနားသောအမည်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားသောလေ့ကျင့်ရေးယူနစ်တစ်သမတ်တည်းထွက်ယူသွားတတ်၏အမှုဆောင်နေကြတယ်, 1957 အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်ဤလေ့ကျင့်ရေးမီးဖို, 1971 နှစ်ကြာညွှန်ကြားမှုသင်တန်းကျောင်းအဖြစ် restructured ခဲ့သည်။ TCDD Eskisehir သင်တန်းကျောင်းပထမဦးဆုံးစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအများဆုံးသင်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
မီးရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UIC) သည်ဒိုဟာ 03 အပေါ်သူ၏မြို့တော်ကိုဇူလိုင်လ 04 2012-10 Katar` ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာညီလာခံ (UIC-Rama) အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်းကျောင်းEskişehirအဆိုပါသင်တန်းကျောင်း site ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်။
ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.e-haberajansi.co
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းမှ Eskisehir 30 / 09 / 2012 မီးရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UIC) ကာတာနိုင်ငံ 10 အတွက်လုပ်ဆောင်တယ်။ ဒေသတွင်းလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာညီလာခံ (UIC-Rama) နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်းကျောင်း (အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်း Center- တစ်ဦးက mertcan) TCDD Eskişehirပညာရေးစင်တာတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ TCDD နှင့် UIC mertcan က "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်း" နှင့်အတူပူးပေါင်းအောက်မှာဖွဲ့စည်းနှင့် 01-02 2012 အောက်တိုဘာလတွင် Eskisehir အတွက် "High Speed ​​ကော်မတီအစည်းအဝေး" ကိုဤအစည်းအဝေးအပြိုင် Anemon ဟိုတယ်၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအိပ်ဆောင်၏ပထမနေ့၌ xnumx't "High Speed ​​ကော်မတီအစည်းအဝေး" ကိုစတင်မည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းမှာအောက်တိုဘာလ 1 2012 တနင်္လာနေ့ ...
Teo နဲ့ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကကြေညာလိုက်သည်ရထားစက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်ပါဝင်လာခြင်းသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနှင့်အတူပူးတွဲ edited 06 / 04 / 2018 ရထားမောင်းသူသင်တန်းများတွင်ပါဝင်ရန် Teo နဲ့ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကအရည်အချင်းပြည့်မီပူးတွဲစာရင်းအပေါ်ကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့်အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ပူးပေါင်း. ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲဧပြီလ 10 2018 အပေါ်စတင်မည်ရှေ့တော်၌ထိုသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်နေသောအမှန်တကယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ; 1- Full-စုံတဲ့အစိုးရပိုင်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်မည်သည့်အစီရင်ခံစာယူပါလိမ့်မယ်။ ကနျြးမာရေးဘုတ်အဖွဲ့အစီရင်ခံစာ, A- Vision ၏ဒီဂရီ (လက်ဝဲနှင့်လက်ျာမျက်စိသီးခြားစီဖော်ပြထား) ခအရောင်စစ်ဆေးခြင်း (ishihor စမ်းသပ်မှုပြုမိ), c- ကြားနာစာမေးပွဲ (audiometric စာမေးပွဲစင်သေံပျှမ်းမျှ, 500, 1000 နှင့် 2000 အကြိမ်ရေ၏ပျမ်းမျှ, OR - 30 dB ဖြစ်ရပါမည်။ ) ဃ - Scan ကိုစမ်းသပ်မှု (နှိုးဆွစေနှင့် ...
တူရကီဟာနှင်းလျှောစီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် 12 / 02 / 2015 တူရကီဟာနှင်းလျှောစီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်: တူရကီပထမဦးဆုံးအကြိမ်နှင်းလျှောစီးများအတွက်ဥရောပဖလားချန်ပီယံရှစ် hosting ဖြစ်ပါတယ်။ Erciyes နှင်းလျှောစီး (FIS) သည်ဥရောပဖလားချန်ပီယံရှစ်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း740 အားကစားသမားမြားတကျရောကျနှင်းလျောစီးမှာကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်မှ။ Kayseri ဟာချန်ပီယံရှစ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mustafa Yalcin, လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါရိုက်တာ Mustafa Eskici အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့, Erciyes Inc ကိုဥက္ကဋ္ဌ Murat Cahit Cıngıနှင့်တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတောင်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌ Memet ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ Erciyes နှင်းလျှောစီး Center က 250 "ဟုပြောသည်တူရကီCıngıအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့်ချန်ပီယံလုပ်နေတယ် ...
ဝန်ကြီးYıldırım, 'အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT Bilecik အတွက်ဆောက်လုပ်ရေး site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Teo နဲ့ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကကြေညာလိုက်သည်ရထားစက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်ပါဝင်လာခြင်းသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနှင့်အတူပူးတွဲ edited